Iflethi okanye indlu ekwicomplex enobuhlobo embindini wesixeko - Király utca - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enobuhlobo embindini wesixeko - Király utca
Iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex encinci embindini wePécs, embindini wesitrato sokuhamba (Király utca). Ngezantsi kwendawo yokuhlala yenye yezona bhari zithandwayo ePécs, kwigumbi lokuhlala, kwaye indawo yesidlo sakusasa esixekweni sisidlo sakusasa. Phantse zonke iindawo ezinkulu zikumgama wemizuzu eyi-10 okanye ngaphantsi.
Iflethi inekhitshi negumbi lokuhlambela layo. Sinegumbi elinye elinokuphumla kwibhedi elala abantu ababini kunye nebhedi yegalari. I-wifi ifumaneka simahla!!!
!! Kubalulekile ukwazi ukuba iindawo zokuhlala ziphakathi kwisithili sePécs, kwaye iiklabhu zingaphantsi kwaye zingaphantsi kwaye zikufutshane nathi, ngoko zihlala zivulekile de kube sekuseni, ngoko kunzima ukulala okanye ukuba nabantwana abancinci. (Sinikezela ngeendlebe simahla xa ucelile.)
4.72 · Izimvo eziyi-50
Enye yezona ndawo zintle eTettye Park ikwafumaneka ngokuhamba imizuzu eyi-10 ukuya kwiindawo zembali ezifana neGázi Kasim pasa jams, iOceansan Mauzóum, iZsolnay District, kunye nenye yezona ndawo zintle ePécs. Kukho iivenkile ezininzi kunye neevenkile zokutyela eNap Hostel Pécs.
Ungangena nangaliphi na ixesha ukususela ngo-1pm ukuya ku-8pm. Ukuba ufika ngelinye ixesha, nceda uqiniseke ukuba uhlola ngefowuni. Ixesha lokuphuma ngu- ngo-10: 00 kusasa.
Inombolo yomthetho: KO20003277